भिडियो समाचार : कर बढेपनि डिजेल–पेट्रोलको मूल्य नबढ्ने, दुर्घटनामा सीपी मैनाली घाइते | Ratopati
सरकारले पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर थपेर १० रुपैया पुर्याएको छ । बिहीवार सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सोही मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सो जानकारी दिएका हुन् ।
गत फागुन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर १० रुपैया विकास कर लगाउने निर्णय गरेको थियो । बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५रुपैयाँ कर लगाउन थालेको थियो । अहिले आएर सो करमा ५ रुपैयाँ थपेर १० पुर्याइएको हो ।
यता पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा थप ५ रुपैंया विकास कर लगाइए पनि मूल्य भने नबढ्ने भएको छ । नेपाल आयल निगमले पूर्वाधार करमा थपिएको कर निगमले लिँदै आएको नाफाबाट समायोजन गर्ने तयारी गरेको हो । कर बढेकै कारण उपभोक्ताले थप मूल्य व्यहोर्नु नपर्ने नेपाल आयल निगमका नायव कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले जानकारी दिए ।
‘हामी अहिले स्वचालित मूल्य प्रणालीमा छौं, त्यसैले अन्तर्रााष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटबढ भएसँगै हाम्रोमा पनि मूल्य घटबढ हुन्छ । तर सरकारले बढाएको करकै लागि हामी मूल्य बढाउँदैनौं, निगमसँग अहिले रहेको नाफाबाटै त्यो घट्ने हो,’ नायव कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले भने ।
एआईजीमा बढुवा सिफारिस
नेपाल प्रहरीको रिक्त रहेको एआईजी पदमा तीन जनाको बढुवा सिफारिस भएको छ । गृह मन्त्रालयले रिक्त रहेको पदमा डीआईजीत्रस तारणी लम्साल, शैलेश थापा क्षेत्री र हरि पालको बढुवा सिफारिस गरेको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार लम्साल एक नम्बर, थापा दुई नम्बर र हरि पाल तेस्रो नम्बरमा बढुवा सिफारिस भएका हुन् ।
सीपी मैनाली घाइते
मालेका महासचिव सीपी मैनाली सवारी दुर्घटनामा घाइते भएका छन् । बिहीबार बर्दिबासस्थित रातुको पुलमा उनी सवार गाडी अर्को गाडीसँग ठोक्किएर दुर्घटना भएको थियो ।
मैनाली सवार बा ४ च २१२० नम्बरको कारलाई विपरीत दिशाबाट आइरहेको ना ४ ख ७६६८ नम्बरको पिकअफ भ्यानले ठक्कर दिएको थियो ।
दुर्घटनामा परी महासचिव मनौलीका छोरा, बुहारी, नाती र चालक समेत गरी पाँच जना घाईते भएका छन् ।
दुर्घटनामा मनौलीका छोरा ३० बर्षीय सरोज मैनाली, बुहारी पुजा ढुङ्गाना, ५ बर्षीय नाती एन मैनाली र चालक रामप्रसाद पौडेल घाईते भएका छन् । दुर्घटनामा मैनाली र बुहारी पुजा गम्भिर घाइते भएको ईलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिवासका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजन चापागाईले जानकारी दिए ।
मैनालीको टाउको र शरीरको अन्य भागमा गम्भीर चोट लाग्नुका साथै खुट्टा भाँचिएको छ भने बुहारीको दुवै खुट्टा भाँचिएको प्रहरीले जनाएको छ । घाइतेलाई हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौँ ल्याइएको छ ।
नेकपा बागमती प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षण
प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको पार्टी भित्रैबाट आलोचना भएको छ । नेकपाको बागमती प्रदेशस्तरीय राजनैतिक प्रशिक्षण तथा भेलामा नेतृत्वको कार्यशैलीबाट नेता कार्यकर्तामा उत्साह हराएको तथा बिचलन आएको भन्दै नेताहरुले नेतृत्वको आलोचना गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले विवाद रहित भएको दिन कम्युनिस्ट पार्टी नरहने बताए । अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीमा विवाद संघर्ष सधै चलिरहने भन्दै यस्ता विवाद भएन भने पार्टी नै नरहने बताए ।
अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी पोखरीको पानी होइन भन्दै पार्टीलाई विघटन र विभाजित हुन नदिने बताए । बेला बेला दुई अध्यक्ष लड्खडाउने भएपनि पार्टी भने दशकौंसम्म चल्ने प्रचण्डले बताए । उनले एमसीसी राष्ट्रको हितमा हुने गरी अगाडि बढाउने पनि बताए ।
यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको बचाउ गर्दै विवाद निम्तिएकाले मात्रै उनले मन्त्रीपदबाट राजीनामा दिएको बताए ।
यसैगरी वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टीभित्र समस्या रहेको स्वीकार गर्दैसमस्या समाधान हुने र नआत्तिन कार्यकर्तालाई अनुरोध गरे । नेपालले पार्टीलाई विघटनको दिशामा जान नदिन सबै गम्भीर भएर अघि बढ्नुपर्नेमा समेत जोड दिए ।
त्यसैगरी, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले पार्टी एकताले अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना भएको बताए । उनले विगतको आचरणले वर्तमानमा समस्या ल्याएको दाबी गरे । पोखरेलले सही विचारबाट निर्देशित नभएको पंक्ति दिशाविहीन हुने बताउँदै दुवै पार्टीको विचार अङ्गाल्दा समस्या आएको बताए ।
यता बागमती प्रदेश इन्चार्ज अष्ठलक्ष्मी शाक्ले नेतृत्वको कार्यशैलीको आलोचना गरिन् । उनले नेताहरुले आफ्नो धरातल बिर्सन नहुनेमा जोड दिँदै गणतन्त्रमा पनि नेताहरुमा सामन्ती सोच र आर्थिक चलखेल बढेको बताइन् ।
उनले प्रधानमन्त्री ओलीको जन्मदिनमा केक काटेर राजसी शैली अपनाइएकोमा पनि विरोध गरिन् । केक काटेर जन्मदिन मनाउने मौलिक संस्कार नभएको बताउँदै त्यसमा पनि नेपालको नक्सा चिराचिरा पार्ने के को चलन हो ? भन्दै प्रश्न गरिन् ।
प्रतिनिधिसभामा जनार्दन शर्मा
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद जनार्दन शर्माले नेपाल ट्रटको जग्गासम्बन्धी स्वेतपत्र जारी गरेर कसैलाई नतर्साउन चेतावनी दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै शर्माले आफूले गृहमन्त्रीबाट २०७४ असोज ३० गते नै राजीनामा दिएको भएपनि २०७४ कात्र्तिक १३ गते भएको भनिएको निर्णयमा आफ्नो नाम जोडिएको प्रति गम्भिर आपत्ति जनाए ।
२०७४ असोज ३० गते नै आफू गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट बाहिरिएको उल्लेख गर्दै उनले तर्साउन नाम जोडिएको हो ? वा मलाई आत्मसमर्पण गराउन खोजिएको हो ? भन्दै प्रश्न गरे ।
उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णयहरुमा नाम उल्लेख नहुनु र त्यो भन्दा अगाडीको सरकारले गरेका निर्णयमा नाम लेखिनुले पनि आशंका उब्जाएको बताए ।
राष्ट्रियसभामा खिमलालका कुरा
राष्ट्रियसभाबैठकको विशेष समयमा बोल्दै नेकपाका सांसद खिमलाल भट्टराईले नेकपा स्वयंको व्यवहारका कारणले राजनीतिक स्थायीत्व माथि नै प्रश्न जन्मने अवस्था उत्पन्न भइरहेको भन्दै त्यस तर्फ नेताहरुको ध्यानाकर्षण गराए । एकाध घटना बाहेक सरकारले आमरुपमा राम्रा कामहरुको सम्पादन गरेको भएपनि त्यसको सम्प्रेषण हुन नसकेको उनले बताए ।
त्यसैगरी, बैठकमा बोल्दै कांग्रेसका बद्री पाण्डेले मुलुकमा भइरहेका पछिल्ला घटनाबारे सदनलाई जानकारी गराउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।
दुर्घटनामा गम्भीर घाइते सीपी मैनालीसहित सबैलाई काठमाडौं ल्याइयो (तस्बिरसहित)
रवीन्द्र अधिकारी स्मृति
सरकारले तत्कालिन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको स्मृतिमा ‘रवीन्द्र स्मृति पर्यटन पुरस्कार’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।
एक वर्ष अघि ताप्लेजुङमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका अधिकारीको पहिलो स्मृति दिवसका अवसरमा बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले पुरस्कार स्थापना गर्ने घोषणा गरे ।
मन्त्री भट्टराईले कार्यविधि निर्माण प्रकृयामा रहेकाले यस वर्षको पुरस्कार अधिकारीको जन्मदिन आगामी बैसाख २२ गते पारेर वितरण गरिने र अर्को वर्षबाट भने स्मृति दिवसकै दिन वितरण गरिने जानकारी दिए ।
नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले संविधान संशोधनको आवश्यकता भएपनि राष्ट्रिय सहमति विना सम्भव नभएको बताएका छन् ।
एक साक्षात्कारमा उनले संविधान सम्झौताको दस्तावेज भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय सहमति जुटेको खण्डमा संशोधन गर्न सकिने तर सहमति नभए संशोधन नै गर्न नसकिने बताए ।